Xukuumada Ra`iisul wasaare Khayre oo gashay jahawareer siyaasadeed oo la xiriirta arinta Qalbi Dhagax -
Hoteelada ku yaala Muqdisho inta ugu badan ayaa hada waxaa ka socda Abaabulka loogu jiro Badbaadinta Xukuumada uu Wasiirka kowaad uu ka yahay Ra`iisul wasaare Xasan Cali Khayre ka dib dhiibistii Qalbi dhagax.
Hoteelada Jasiira, Saxafi, Muqdisho Hotel, Buraaqo Makah Al-Mukaramah,Weheliye iyo kuwo kale oo tiro badan ayaa waxaa ka socda kala shukaansiga Baarlamanka labada Aqal ee Soomaaliya.
Xubno ka mid ah Baarlamanka labada Aqal ee Soomaaliya ayaa waxay wacad ku mareen in ay ridayaan xukuumada hadii aanay ka laabanin Go,aankii ay qaateen Golaha wasiirada Soomaaliya.
Labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa waxaa la sheegayaa in ay doonayaan in xukuumada ay ridaan marna ka laaban doonin Go,aankooda hadii xukuumada ka laabanin hadafkeeda.
iyadoo wararka qaar oo aan helnay ay sheegayaan in Ra,iisul wasaaraha uu Bixinayo lacag Tiro badan si loo badbaadiyo Xukuumada.
Dhinaca kale waxaa Maalinta Beri ah Baaqanaya sida aan xogta Ku helnay Kulankii barlamanka Aqalka Hoose waxaasa kulmi doona Gudiyada qaar ee Baarlamanka sida aan xogta ku helanay.
Siyaasiyiinta iyo Aqoon yahanada soomaaliyeed waxay sheegayaan dalka hada in uu u,egyahay sida waxa doorasho lagli rabo oo kale sida xiisada ay u kacsan tahay markii loo eego.
Geesta kale war aan si hoose u helnay ayaa waxaa uu sheegayaa in Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu dhiiiga ku kacay arinta Qalbi Dhagax awgeed iyadoo Madaxweynaha la xaqiijiyay in uu qabo Cudurka Dhiikarka.
Waxaa kale oo xusid mudan in Madaxweyanaha Soomaaliya mudane Farmaajo uu san ka hadlin arinta Qalbi Dhagax.
Related Items:Featured, Xukuumada Ra`iisul wasaare Khayre oo Gashay Jahawareer Siyaasadeed Ka dib Arinta Qalbi Dhagax
Maxamed Cabdi Waare oo ku Guulaystay Doorashada Madax tanimada Maamulka Hir-shabeelle